Shina: Ady Isan-taona Hanoherana ny Sivan’ny 4 Jona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2012 2:11 GMT
Omaly no fiaretan-tory fankalazana isan-taona amin'ny alàlan'ny fandrehetana labozia ny vonomokan'ny 4 Jona tao Hong Kong. Manerana ny sisintanin'ny tanibe Shina, dia datin'andro ho an'ny sivana aterineto izy ity. Ilay fepetran-tsivana dia ny fitatavanana ireo tena mafampàna mifandray aminà isa, fotoana, fahatsiarovana, terna, fikambanana ary anarana, araka ny lisitra nomen'i Anne Henochowicz avy ao amin'ny China Digital Time. Ity ambany ity ny fitanisàna ny ampahany amin'ilay lisitra lavabe an'ny CDT :
Tarehintsoratra manokana amin'ny teny Shinoa :
• labozia (烛): toy ny ao anaty labozia [vita tamin'ny jabora] (蜡烛), fitoeranna labozia (烛光); tamin'ny faran'ny herinandro dia nesorin'ny Sina Weibo ny ‘emoticon’ sarinà labozia.
• rà (血): toy ny ao amin'ny famoretana anaty rà mandriaka (血腥镇压), tranga nihoson-drà (流血事件)
• vahoaka (民): toy ny ao amin'ny Tafika fanafaham-Bahoaka (人民解放军), demaokrasia (民主)
• fihetsiketsehana (运): toy ny ao amin'ny fihetsiketsehana demaokratika (民运), fihetsiketsehan'ny mpianatra (学运)
• hetsika (动): toy ny ao amin'ny hetsiky ny mpianatra (如学生运动), hetsika fahatsiarovana (悼念活动), hetsika ara-tafika (出动军队)
• governemanta (政): toy ny ao amin'ny Fang Zheng(方政), kaomiseran'ny rezimanta (团政委), jadon'antoko tokana (一党专政)
• famotehana (碾):toy ny ao amin'ny hoe nopotehana ny tongotr'i Fang Zheng (方政被碾断双腿), mamotika sy mandrava (碾毁)
• tǎn (坦): toy ny ao amin'ny tank (坦克)
• lanonana (祭): toy ny ao amin'ny Lanonana ho an'ireo nihara-bono tao Tiananmen (祭奠六四遇难者)
Tarehi-marika mbaminà teny mifandraika amin'ny Datin'andron'ny vonoolona tao Tiananmen :
• 8, 8 (八), valo (捌), faingo valo : rehefa mety ho endrika “valo” sy endrika hafa momba ireo isa eto ambany.
• 9, 9 (九), sivy (玖), faingo sivy
• 6, 6 (六), enina (陆), faingo enina
• 4, 4 (四), efatra (肆), faingo efatra
• 23, 23 (廿三), 23 (二十三): Androany no fankalazana faha-23 an'ilay vonoolona.
• 35, 35 (三十五): Antsoin'ireo mpiondana ho May faha-35-n'ny sivana ny amin'izao fotoana.
Ireo lohahevitra hafa mifandraika amin'ny:
• tsingerintaona (周年)
• anio (今天): hikarohana ny datin'andro anio.
• omaly (昨天)
• rahampitso (明天)
• io taona io (那年): ilazan'ireo mpiondana ny 1989.
• fanambaràna (宣言): toy ny ao amin'ny “Fanambaràna Fitokonana Tsy Hihinan-kanina” (绝食宣言)
• fankalazàna (纪念): fankalazàna 6.4 [satria mazàna i Tiananmen no entina manondro ny] (纪念六四), Tangambaton'ireo Mahery Fo (英雄纪念碑), sns.
• fanamboarana (平反): fiantsoana 6.4
• Victoria Park (维园): Misy fiaretan-tory itondràna laboziamirehitra eo amin'ny Victoria Park ao Hong Kong isan-taona mba ho fatsiarovana ny vonoolona tao Tiananmen.
• zaridaina (公园)
• fampahatsiahivana (追思)
• fisaonana (悼念): toy ny ao amin'ny fisaonana 6.4
• fahanginana ho fanomezam-boninahitra (默哀)
• hetsika takariva (晚会)
• fitafy mainty (黑衣): Niantso ny vahoaka hidina eny an'arabe ka hitafy mainty ireo mpiondana aterineto ho fahatsiarovana ny Tiananmen.
• midina eny an-dalambe (上街)
• aza adino velively (勿忘): toy ny ao amin'ny aza dino velively 6.4 (勿忘六四), aza adino velively ny zava-doza teto amin'ny firenena (勿忘国难)
• aza adino velively (毋忘): toy ny etsy ambony
• Reny (Tian)anmen (（天）安门母亲)
• mizaka tena (自治): toy ny ao amin'ny “Governemantan'ny Mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Peking”（北大自治会）
Kanefa, afaka mandingana tsara an'ireo fanivanana teny ireo ny sary ary ny sary nampiasàna code tahaka io ambony io dia niely be mihitsy teny anivon'ny sehatra media sosialy [mba hisy dikany ny tian'ny sary holazaina dia ilainao ny manodina azy ambony-ambany]. Satria sarotra ny mitily ny karazan-tsary nampiasana code toy ireny, dia nanapa-kevitra ny sehatra fitorahana bilaogy kiritika toy ny Sina Weibo tamin'ny farany fa hibahana adiresy IP maromaro tao Hong Kong tsy ho afaka mampakatra sary ao Shina ho an'ny sehatra natao ho an'ny daholobe (ireo mpampiasa dia mbola afaka mijery ny lahatsoratra nakariny manokana ao amin'ny azy) nanomboka ny 3 sy 4 Jona. Na izany aza, ireo sary nakarina talohan'ny 3 Jona dia mbola azo ifampizaràna.
Ho fanampin'ireo, ny icone fanehoana fihetseham-po mampiasa “labozia” dia nesorina ihany koa tany amin'ireo sehatra fitrahana bilaogy kiritika. Na teo aza ny ezaka rehetra, ny tondron'ny fanakalozam-bola vahiny ao Shanghai dia nisokatra tamin'ny 2346.98 (toy ny hoe decodage-n'ny tsingerina faha-23 n'ny 4 Jona 1989) ary very teboka 64.89 omaly 4 Jona. Sa mety ho tsaohtsaho indray io ?